चुरे क्षेत्रमा सरकारले कालीदास प्रवृत्ति देखायो : विमलेन्द्र निधि – MEDIA DARPAN
चुरे क्षेत्रमा सरकारले कालीदास प्रवृत्ति देखायो : विमलेन्द्र निधि
नागरिकता अध्यादेशको कन्टेन्टमा समर्थन छ, प्रक्रियामा विरोध
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १०:३४
काठमाडौं । दोस्रोपटक संसद विघटन भई मुलुकको राजनीतिक कार्यदिशा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतबाट संसद विघटन सदर गराएर मुलुकलाई चुनावमा कसिएका छन् । विपक्षी गठबन्धन संसद पुनस्र्थापना गराई नयाँ सरकार बनाउने व्यग्र प्रतिक्षामा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन बनाउने थलोका रुपमा रहेको संसद विघटन गरी अध्यादेशमार्फत काम गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट र नागरिकता कानुन चर्चाको विषय बनेको छ । बजेटको १९९ नम्बर बुँदा र नागरिकता कानुनलाई मधेससँग जोडेर बहसको विषय बनाइएको छ ।
सरकार बनाउन तम्सिएको काँग्रेसलाई भदौ तेस्रो साताभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यिनै विषयमा नेपाली हामीले काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग कुराकानी गरेका छौं ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा चुरे क्षेत्रको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गरिनेछ’ भनिएको छ । सरकारको यो नीतिप्रति काँग्रेसको विरोध किन ?
यो एकदम खतरनाक र घातक नीति हो । यो मधेसका लागि सबैभन्दा घातक हो । मधेसका लागि घातक त छँदैछ, प्रकारान्तरले चुरेभन्दा माथि उत्तरतिर पहाड र हिमालसम्म यसको असर पर्छ । चुरेको संरक्षण गर्नु नेपालकै भूगोलका लागि जरुरी छ । धेरै पहिलेदेखि भूगर्वविद् र वन विशेषज्ञ सबैले चुरेको संरक्षणको आवश्यकता औल्याउँदै आउनुभएको छ ।
जसको पालामा चुरेको दोहन भयो, उसैले यतिबेला विरोध गरिरहेको सरकारी पक्षको तर्क छ नि ? तपाईँहरुका पालामा के काम गर्नु भएको थियो ?
यसमा म विस्तृत बताउँछु, सुन्नु होला । हामी जेलमा हुँदा जर्मन रिसर्च स्कलरसिपको फरेस्टसम्बन्धी रिसर्च गर्ने किताब थियो । वन र भूगोलबारे रिसर्च गरेर निष्कर्ष निकालिएको थियो कि मधेस र पहाडका बीचमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिएन भने मधेसको पुरै भूभागलाई मरुभूमि बनाउँछ ।
छुवाछुत २१ औं शताब्दीको मानव समुदायका लागि लज्जाको बिषय : अध्यक्ष प्रचण्ड
संविधान पालनमा केही चुनौती आए पनि राष्ट्र सही बाटोमा फर्किएर अगाडि बढिरहेको छ :…
संविधान दिवसमा ९०३ जनालाई मानपदवी र विभूषण
एनआरएनएका उजुरीकर्ताको बयान : सत्तामा बस्नेलाई नै प्रतिपक्ष जस्तो लाग्यो !
एमालेको सहयोग बिना एमसीसी पास गर्न प्रदीप ज्ञवालीको चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई मन्त्री नियुक्त
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार संविधानको भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील…
संविधान पालनमा केही चुनौती आए पनि राष्ट्र सही बाटोमा फर्किएर अगाडि…
एनआरएनएका उजुरीकर्ताको बयान : सत्तामा बस्नेलाई नै प्रतिपक्ष जस्तो…
संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रयत्नशील छ :…
संविधान पालनमा केही चुनौती आए पनि राष्ट्र सही बाटोमा फर्किएर…
एनआरएनएका उजुरीकर्ताको बयान : सत्तामा बस्नेलाई नै प्रतिपक्ष…
संवैधानिक गतिरोध हटाउन अदालत क्रियाशील : प्रधानन्यायाधीश…